Donald Trump oo Shaki Galiyay Midnimada dalka Shiinaha iyo Jasiiradda Taiwan
December 12, 2016 – Dowladda Shiinaha ayaa shaacisay inay “Walaac dhab ah” ka qabto hadal kasoo yeeray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo su’aal ka keenay in Mareykanka uu sii wado siyaasadiisa loo yaqaan (One China Policy) “Hal China” illaa dowladda China ay ka sameyso tanaasullo ganacsi.
Sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddaas, oo sheegeysa in Taiwan ay qeyb ka tahay dalka Shiinaha, ay saldhig u tahay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka.
Afhayeenka ayaa ugu baaqay maamulka Trump inuu “Fahmo halista” ay keeni karto arrintan.
Wargeyska dowladda shiinaha ay maamusho ee loo yaqaan Global Times ayaa sheegaya in Trump uu yahay qof “aan xikmad lahayn” haddii uu ka fekerayo in siyaasadda Taiwan u adeegsan karo inuu dalka Shiinaha ku qasbo wada-xaajoodyo ganacsi, loogana baahan yahay inuu fahmo siyaasadda arrimaha dibedda sida ay u shaqayso.
Dowladda Shiinaha ayaa waxa uu sidoo kale soo jeediyay in haddii Trump uu isku dayo inuu taageero madax banaanida Taiwan ama uu hub ka iibiyo, in dalka Shiinaha aysan Washington kula saaxiibi doonin arrimaha caalamiga ah, ayna taageero milateri siin doonto kuwa dalka Mareykanka kasoo horjeeda.